Izinhlobo ze-Apple Releases 'Release Candidate' ze-iOS ne-iPadOS 14.6 | Izindaba ze-IPhone
I-Apple ikhipha izinguqulo ze- 'Release Candidate' ze-iOS ne-iPadOS 14.6
U-Angel Gonzalez | | iOS 14, Izaziso
Umcimbi we-Apple ngenyanga edlule unikeze amazwibela ezindaba mayelana nemikhiqizo ye-Apple. Phakathi kwabo, iMac entsha okubuyekezwa kwayo kokuqala esikubonayo namuhla kanye ne- I-AirTag, umaki wendawo wezinto zethu. Kodwa-ke, inkulumo eyisihluthulelo ibuye iveze nezindaba ezihlobene nesoftware njengokufika kwe- I-Apple Card Family noma okubhaliselwe kuma-Apple Podcasts. Zonke lezi zindaba zizongena IOS ne-iPadOS 14.6. Le nguqulo isivele inohlobo olucacisiwe olubhabhadisiwe njenge- 'Release Candidate' futhi isiyatholakala konjiniyela.
IOS ne-iPadOS 14.6 izofinyelela kubo bonke abasebenzisi ngesonto elizayo
I-Las Yini okusha for iOS and iPadOS 14.6 zimbalwa ngokuqhathaniswa nezici ezinhle ezikhishwe ku-iOS 14.5. Kodwa-ke bonke bamukelwa kahle, ikakhulukazi ngokufika kweSpatial Audio ngeDolby Atmos nomsebenzi weLossless Audio, owethulwe izolo. Eqinisweni, lezo zici zizotholakala kusibuyekezo esizokhishwa ngesonto elizayo.
Eqinisweni, I-Apple ikhiphe inguqulo ethi 'Release Candidate' IOS ne-iPadOS 14.6, okucishe kube okokugcina i-Big Apple eyenza kutholakale konjiniyela ukuthola ukubukeka kokugcina ukuze konke kulunge lapho kwethulwa. Njengezindaba ezibalulekile, le nguqulo entsha iza nayo yini okusha kuma-Apple Podcasts okuhlobene nokubhaliselwa kweziteshi nezinhlelo ngazinye, okuzovumela ubudlelwano obukhethekile phakathi komculi nomsebenzisi.
I-iOS 14.6 izovumela ukufaka i-imeyili ku-Imodi elahlekile yezinto zosesho lwenethiwekhi
Ngaphezu kwalokho, i- Umndeni We-Apple Card, umsebenzi ozokuvumela ukuthi wabelane ngaleli khadi lesikweletu nabantu abangafika kwabahlanu, kufaka phakathi labo abangaphansi kweminyaka eyi-13. Ngaphezu kwalokho, amamethrikhi nezibalo zezindleko ezenziwa ngekhadi zihlanganisiwe ngaphezu kwendlela yokwengeza imikhawulo yokusebenzisa imali.
Ekugcineni, kunezindaba mayelana nokusha I-AirTag. Ngenguqulo entsha ye-iOS ne-iPadOS 14.6 kuzokwengeza i-imeyili ku-AirTag ebhangqiwe ukuze kuthi lapho kusebenza imodi elahlekile leyo mininingwane ingavela hhayi inombolo yocingo kuphela, okuwukuphela kwento manje engalungiswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izaziso » I-Apple ikhipha izinguqulo ze- 'Release Candidate' ze-iOS ne-iPadOS 14.6
Uchungechunge lwe-Apple 7 olunemiphetho eyisicaba?
I-Apple iguqula i-Shazam ibe yi-App Clip ngokusebenzisa ukuqashelwa okuzenzakalelayo